UNESCO MGIEP waxay bilawday Ololaha Dhalinyarada Caalamiga ah ee Naxariista - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
UNESCO MGIEP waxay bilawday olole dhalinyaro caalami ah oo ku saabsan naxariista
October 6, 2018 Warar & Muuqaal 0
(Waxaa daabacay: Heerka Ganacsiga. Oktoobar 4, 2018)
[icon name = ”share” class = ”” unprefixed_class = ””] Wax dheeri ah baro: booqo mareegta UNESCO MGIEP ee Ololaha Dhallinyarada Caalamiga ah ee Naxariista Yoolalka Horumarinta Joogtada ah
Daahfurka caalamiga ah ee UNESCO Mahatma Gandhi Institute for Education for Peace and Sustainable Development (MGIEP) ayaa goobjoog ka ahaa ka qaybgal ballaaran oo ay ka qayb qaateen dhallinyaro afar dal - Koonfur Afrika, Hindiya, Pakistan iyo Mexico, halkaas oo UNESCO MGIEP ay ka waday Ololaha Dhallinyarada Caalamiga ah ee Wanaagsan ee Himilooyinka Horumarinta Joogtada ah. (SDG) ayaa si isku mid ah loo bilaabay iyada oo loo marayo xiriir toos ah oo isku xira afarta qaran.
Dareenka runta ah ee ololaha, daahfurka ayaa goobjoog u ahaa falal naxariis badan oo ay dhallinyaradu u geysay hal ama in ka badan oo ah Yoolalka Horumarinta Joogtada ah.
Hindiya, Koonfur Afrika, Pakistan, iyo Meksiko, dhallinyaradu waxay ka qaybgaleen waxqabadyo isugu jira xerooyin dhiig ku deeqid, dariiqyo qaybinta cuntada iyo nadiifin ballaaran waxayna u dabbaaldegeen awoodda falalka naxariista leh.
Hindiya gudaheeda, ku dhawaad ​​242 unug oo dhiig ah ayaa lagu soo ururiyey wadista oo ay soo qabanqaabisay wada -hawlgalaha ololaha UNESCO MGIEP, Ururka Laanqeyrta Cas ee Hindiya ee New Delhi. Machadka Kalinga ee Cilmiga Bulshada, kumanaan arday oo dhallinyaro ah oo dugsi dhigata ayaa la siiyay cashar ku saabsan Yoolalka Horumarka Joogtada ah gaar ahaan SDG4 oo la xiriira waxbarashada nabadda iyo horumar waara. Ciidanka Robin Hood wuxuu muujiyey sida ay uga go'an tahay ololaha iyo naxariista isagoo abaabulay waddooyin badan oo cunto ah oo ku baahsan 34 magaalo oo Hindiya ah iyo laba Pakistan ah oo u adeegaya wadar ahaan 21 kun (Qiyaas).
Dhacdadii rasmiga ahayd ee daahfurka Delhi ayaa goob joog u ahayd dhallinta iyo siyaasad -dejiyeyaasha oo ku jira dood xiiso leh oo ku saabsan Waxbarashada Naxariista ee xilligii Isbeddelka Bulshada iyo Qorshaha. Daahfurka rasmiga ah waxaa bilaabay Mr. Leon Prop, Madaxa Xiriirka Caalamiga ah ee Laanqeyrta Cas ee New Delhi oo ka hadlay dhalashada Laanqeyrta Cas iyo wax -ku -oolka cajiibka ah ee ay u leedahay bulshada waqtiyada baahida sida tusaalaha ugu fiican ee awoodda falalka Naxariista.
"Haddii aad rabto inaad noqoto hoggaamiye, noqo buundo," ayuu yidhi, isagoo ku boorriyay dhagaystayaasha dhagaystayaasha inay ka soo baxaan aagagga raaxada oo ay dhab ahaantii ku dhaqmaan rabitaankooda inay noqdaan kuwo naxariis leh.
Dareenkaan waxaa ka dhawaajiyay cinwaanka safiirka dhalinyarada Dr. Neharika Yadav, oo ah haweeneydii ugu horreysay ee rookariska u ah Hindiya una doodda sinnaanta jinsiga (SDG 5). Iyadoo soo xiganaysa sheekadeeda u gaarka ah ee ku saabsan jabinta xuduudaha iyo raacitaankeeda xiisaha leh, waxay ku dhiirri -gelisaa dhallinta inay qaataan hal ilbidhiqsi gudahood maalintii si ay u sameeyaan fal naxariis leh si kasta oo ay u fududahay.
Isagoo iftiiminaya baahida muhiimka ah ee maanta loo qabo Naxariista adduunka, Dr. Karan Singh, Guddoomiyaha UNESCO MGIEP wuxuu yiri: "Waxaan ku noolnahay bad weyn oo rabshado ah, Naxariistuna waa ka -hortagga ugu fiican."
“Naxariistu waa shuruud lama huraan ah haddii aan doonayno inaan dhisno bulshooyin nabdoon oo waara; xallinta caqabadaha adduunka waa inay ka timaaddaa maskaxdeenna shucuureed ee ma aha oo kaliya garaadkeenna, ”ayay tiri Dr. Anantha Duraiappah, Agaasimaha, UNESCO MGIEP.
Magaalada Cape Town, daahfurka ayaa ka dhacay hoolka caanka ah ee City Hall halkaas oo Nelson Mandela uu ka jeediyay khudbaddiisii ​​ugu horreysay ee dadweynaha ka dib markii la sii daayay 1990. Munaasabadda waxaa ka soo qeybgalay 700 oo lagu daray dhallinyaro; daahfurka waxaa bilaabay Ms. Ruchira Kamboj, Wakiilka Sare ee Hindiya ee Koonfur Afrika iyo Agaasimaha Kormeeraha Afrika, Ms. Namhla Mniki-Mangaliso iyo sidoo kale guuleystaha Idol-ka Koonfur Afrika. Pakistan gudaheeda, daahfurka ayaa ka dhacay qayb ka mid ah YESPeace Pakistan Festival ee Islamabad.
Ku beerista Nabadda iyada oo loo marayo Barista Taariikhda ee Dugsiyada Sare ee Rwanda: Fursadaha iyo Caqabadaha
Gudaha Memoriam: Phyllis Kotite
December 17, 2021 Warar & Muuqaal 0
Phyllis Kotite, oo muddo dheer xubin ka ahayd Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda iyo wax ku biirinta UNESCO, ayaa ku geeriyootay todobaadkii hore magaalada Paris. Waxay ahayd u ​​doode oo gacan ka gaysatay dhisidda nabadda iyo waxbarashada rabshadaha la'aanta iyo sidoo kale barnaamijyada ka hortagga colaadaha. [sii wad akhriska…]
Tilmaamaha Caalamiga ah ee Wax ka qabashada Rabshadaha Ku Salaysan Jinsiga ee La Xiriira Iskuulka
February 16, 2017 Siyaasadda 0
Tilmaantaan waxaa looga dan leeyahay in laga helo ilo dhameystiran, hal-joogsi oo ku saabsan rabshadaha ku saleysan jinsiga (SRGBV) ee la xiriira iskuulka, oo ay kujiraan hagitaan hawleed cad oo ku saleysan aqoon, daraasado kaladuwan oo kaladuwan oo laga soo qaatay tusaalayaal waxqabad rajo leh iyo qalab lagu taliyay waaxda waxbarashada iyo la-hawlgalayaasheeda ka shaqeynaya sidii loo tirtiri lahaa rabshadaha ku saleysan jinsiga. [sii wad akhriska…]
July 11, 2018 Warar & Muuqaal 0
Xafiiska UNESCO Aasiya-Baasifigga ee Xafiiska Waxbarashada, oo xarunteedu tahay Bangkok, ayaa daahfuray Mashruuca Iskuullada Farxada leh, ujeeddadiisuna tahay kor u qaadista farxadda dugsiyada iyadoo loo marayo kor u qaadista barashada iyo horumarka guud [sii wad akhriska…]